“म जीवनको अन्तिम समय दाङमा बिताउन चाहन्छु” – Pahilo Page
“म जीवनको अन्तिम समय दाङमा बिताउन चाहन्छु”
सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरा यतिबेला दाङ क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार भएर मतदातासँग घरदैलो गर्दै आएका छन् । उनी एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार हुन् । दाङमै रहेर घरदैलो गरिरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री महराले दाङमा बाम गठबन्धनले चुनाव जित्ने निश्चित भएको दावी गर्छन् । महराले दाङलाई प्रदेश नं. ५ को राजधानी र संमृद्ध दाङका एजेण्डा लिएर जनतामाझ गएका छन् । यसैक्रममा संमृद्ध दाङ, दाङ राजधानी, तपाईको उम्मेदवारी र तपाईँका एजेण्डाहरु के–के छन् भन्ने विषयमा सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार कृष्णबहादुर महरासँग गरिएको कुराकानीको सार–संक्षेप ।
१– दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
हो, मैले यसपटक बाम गठबन्धनको तर्फबाट दाङ क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको छु । यो स्वभाविक पनि हो । हामीले समग्र रुपमा देशलाई हेर्नुपर्छ । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै देश समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस अन्तर्गत हामीले पश्चिम नेपालकै केन्द्रमा रहेको दाङलाई समृद्ध बनाउन गहन जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ ।
अबको पाँच वर्षमा दाङलाई समृद्ध बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो । यसका धेरै पक्षहरु छन् । दाङले सिङ्गो पश्चिम नेपाललाई नेतृत्व गर्न सक्छ । अहिले पनि दाङ पुरानो राप्ती अञ्चलको केन्द्रविन्दु हो । दाङलाई ५ नं. प्रदेश, ६ नं. प्रदेश र ७ नं. प्रदेशलाई लिड गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसैको लागि मेरो उम्मेदवारी यसपटक दाङबाट हो ।
२– अहिले तपाईं चुनावी माहोलमा हुनुहुन्छ । तपाईको पक्षमा मत आउने अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
स्वभाविक रुपमा हामीसँग दाङसहित प्रदेश नं. ५ लाई समृद्ध बनाउने एजेण्डा छन्, भिजन छ । त्यसैले पनि जनताले हामीलाई नै रोज्नुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । पहिले २०६४ सालमा पनि दङ्गाली जनताले मलाई नै रोजेका थिए । अब पनि मलाई नै रोज्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।
चुनावी माहोलमा रहँदा हाम्रो पक्ष अथवा बाम गठबन्धनको पक्षमा बहुमत आउने पक्का छ । यो हामीलाई जनताले मन पराएको भन्दा पनि हाम्रो भिजनलाई मन पराएका हुन् । हामीले भन्दै आएको समृद्ध दाङ, प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ हामीले बनाएरै छोड्छौं । यसमा कुनै द्विविधा छैन । म त के भन्न चाहन्छु भने अबको समय म दाङकै लागि व्यतित गर्न चाहन्छु, दाङकै समृद्धिका लागि खर्च गर्न चाहन्छु ।
३– चुनाव जितेपछि गाउँघरमा फर्केर आउनु हुँदैन भन्ने आरोप छ नि ?
२०६४ सालको संविधानसभाको चुनाव जितेपछि म हराएको होइन, यो सबैलाई थाहा छ । केन्द्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले उतै अलि व्यस्त भएको हो । तैपनि सबैलाई थाहा छ, दाङ पनि समय समयमा आएको र यहाँको विकास र समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गरेको । यो अवस्थाले यहाँका जनतासँग अलि भेटघाट कम भएको मात्रै हो । तर अब त्यो पातलो भेटघाट बाक्लिएर आएको छ, आउने छ । किनभने अब म दाङकै लागि भनेर फेरि दाङमा आएको छु ।
४– तपाई अर्थमन्त्री हुँदा यहाँको लागि करोडौं बजेट विनियोजन भयो । तपाईले दाङको विकासमा कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ ?
मुख्यतः म अर्थमन्त्री हुँदा दाङको सडक निर्माणमा धेरै बजेट विनियोजन भएको छ । मैले जिल्लामा विनियोजन गरेको बजेटको सही सदुपयोग भयो कि भएन भनेर अझै हेर्न बाँकी छ ।
दाङ जिल्लामा वार्षिक झण्डै १४÷१५ करोड विनियोजन हुँदै आएको थियो । म अर्थमन्त्री हुँदा दाङमा दुई÷तीन अर्ब नै बजेट विनियोजन भयो । यो उल्लेखनीय कुरा हो । म अर्थमन्त्री हुँदा घोराहीदेखि मुर्कुटी हुँदै प्यूठान जोड्ने सडक, दाङ–सुर्खेत सडक, सहिद मार्ग लगायतका ठूला योजनाका सडकमा बजेट विनियोजन भएको छ ।
५. तपाईले समृद्ध दाङको कुरालाई निकै जोडतोडका साथ उठाइरहनुभएको छ । समृद्ध दाङका आधारहरु के देख्नुभएको छ ? दाङ समृद्ध बनाउनको लागि तपाईहरुसँग के योजना छ ?
दाङ उपत्यका एसियाकै दोस्रो ठूलो उपत्यका हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो उपत्यका हो । भूगोलले हामीलाई निकै साथ दिएको छ । दोस्रो कुरा वातावरणीय हिसाबले निकै राम्रो छ । यो विशुद्ध तराई होइन । यो पूरै पहाड पनि होइन । यहाँको समुदाय असाध्यै सहमतिपूर्ण तरिकाले अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
तेस्रो कुरा, यहाँबाट पश्चिम नेपालका ६ नं र ७ नं प्रदेशका प्रमुख शहरहरु जोडिदैछन् । यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राम्रो सम्भावना रहेको छ । दाङ लुम्बिनीको बैकल्पिक बासस्थान बन्न सक्छ । लुम्बिनी सीमा क्षेत्रमा छ । त्यहाँ निकै गर्मी हुन्छ । त्यहाँबाट बस्नको लागि पर्यटकहरुलाई यहाँ ल्याउन सकिन्छ । यहाँ पनि केही पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ।
यही बाटो भएर प्रसिद्ध तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी जान सकिन्छ । जलजला, छायाँक्षेत्र र कर्णालीको रारालाई दाङसँग जोड्न सकिन्छ । यी सबै क्षेत्रलाई हामीले जोडेर यसलाई केन्द्रविन्दु बनाउनु पर्छ । यसको आधारमा दाङ यस क्षेत्रकै आर्थिक हब (केन्द्र) बन्न सक्छ ।
दाङमा प्रशस्त कृषियोग्य जमिन छ । यहाँको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि व्यवसायमा छ । हामीले सिंचाइको उचित व्यवस्था गर्नसक्ने हो भने कृषि उत्पादन उल्लेख्य बढ्न जान्छ । यी कारणले समृद्ध दाङ सम्भव छ । पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ हुने सम्भावना बढेको छ । मैले त्यसका लागि मेरो तर्फबाट पहल गरिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि पहल गर्नेछु ।
६– नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य के हो ?
हो, अहिले हाम्रो पार्टीले एमालेसँग गठबन्धन गरेको छ । यो चुनावी गठबन्धन मात्रै होइन । यो गठबन्धनको लामो इतिहास छ । हामीले यसअघि पनि पार्टी एकतासम्मका प्रयास गरेका थियौं । ती प्रयासहरु केही मतभेदका कारण पूरा हुन सकेका थिएनन् । तर, अब यो चुनावी गठबन्धनसँगै पार्टी एकतासम्म जाने छ ।
किनभने सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका सवालमा कम्युनिष्ट विचारधारामा आधारित वामपन्थी, प्रगतिशील शक्तिहरु नै अगाडि छन् । नेपाली कांग्रेस यस मानेमा अलि संकीर्ण छ । ऊ परम्परागत उत्पादन सम्बन्धमै चल्न चाहन्छ । आर्थिक उत्पादन र उत्पादक शक्तिहरुको सम्बन्धमा ऊ धेरै प्रगतिशील ढंगले सोच्न सक्दैन । उसको तुलनामा वामपन्थी, प्रगतिशील खास गरेर ठूला पार्टीका हैसियतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि छन् । यसकारण वामपन्थीहरुको एउटा स्थिर सरकार निर्माण आजको आवश्यकता हो । त्यसको निमित्त वामपन्थी गठबन्धन गरिएको छ ।
७– पार्टी एकताका आधारहरु के–के हुन् ?
विचारधारात्मक रुपमा हामीले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरा गरेका छौं । हाम्रा विचारमा केही भिन्नता छन् । हामीले बाँकी नेपाली समाजको रुपान्तरणको सम्भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने विषयमा अलिकति मतभिन्नता मात्रै हो । यी कुरा भए पनि हाम्रो साझा लक्ष्य भनेको समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्ने नै हो । यसमा दुई दलबीच खासै धेरै अन्तर छैन ।
राजनीतिकरुपमा पनि समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्नका निमित्त हामीले अहिलेको संविधानलाई ठीक ढंगले पूरा गर्ने, संविधानलाई ठीक ढंगले जनतालाई उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्ने र चुनावको माध्यमबाट आर्थिक उन्नति गर्दै जाने भन्ने विषयमा हामीहरुबीच त्यति धेरै अन्तरविरोध छैन । राजनीतिक, वैचारिक छलफल घनिभूत गरेर पार्टी एकता पनि सम्भव छ । एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता २०४८ सालदेखिको प्रयास हो ।
८– माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता फरक–फरक पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । यस्तोमा कसरी एकता सम्भव देख्नुहुन्छ ?
देश र जनताको आवश्यकता नै प्रधान हो । एमाले वा माओवादी केन्द्रभित्र अब आफ्नो स्कूलिङबाट मात्र सीमित भएर हुँदैन । तपाईले हाम्रो पार्टीको इतिहास हेर्नुभयो भने हामी एक जमानामा मशाल थियौं । अर्को जमानामा एकता केन्द्र भयौं । अर्को चरणमा गएर माओवादी भयौं । त्यसपछि एकीकृत माओवादी भयौं । त्यसपछि माओवादी केन्द्र भयौं । हामी बदलिरहेका छौं । बदलिदै अघि बढ्ने नै हो ।
पार्टी एकताको प्रक्रियामा माओवादी केन्द्र एमालेकरण वा एमाले माओवादीकरण हुने होइन । यो त सिंगो देशलाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन कम्युनिष्टकरण हुन हामी सबै माथि उठेर एकताबद्ध हुने कुरा हो । दुबै पक्ष रुपान्तरण हुने कुरा हो । मलाई लाग्छ चुनावसम्म आउँदा पार्टी कार्यकर्तासम्म पनि केही फरक आइसकेको अवस्था छ । अब पार्टी एकता आवश्यक छ । हाम्रो उद्देश्य एउटै हो भन्ने कार्यकर्ताले बुझिसकेका छन् । यसमा एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था छैन । यदि पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पार्टी एकताका लागि खुट्टा कमाए भने उनीहरु नै सिद्धिन्छन् । हामीहरु ५० औं वर्ष पछि धकेलिन्छौं । मलाई लाग्छ शीर्ष नेताहरुले पार्टी एकतामा खुट्टा कमाउने छैनन् ।
९– अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
सर्वप्रथम त तपाईंको मिडियाबाट मेरा कुरा राख्न दिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । र, म के भन्न चाहन्छु भने दाङको समृद्धि र यसलाई पश्चिम नेपालकै केन्द्र बनाउनका लागि दङ्गाली जनता नचुक्नुहोस् । अहिले बाम गठबन्धनको तर्फबाट हामी यहाँको समृद्धिका लागि यहाँ आएका छौं । हामीले संयुक्त घोषणापत्रमार्फत पनि जनतालाई प्रतिवद्धता जनाएका छौं कि दाङलाई प्रदेशको राजधानी र समृद्धितर्फ लैजान कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसका लागि जनताले मंसिर २१ गतेको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई अमूल्य भोट दिएर विजयी बनाउनुहोस् । हामी हाम्रा घोषणापत्र कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध छौं ।
प्रकाशित मिति : आइतवार, मंसिर १७, २०७४ समय : २२:०७:२० 464 पटक पढिएको